असार दोस्रो सा’ताबाट स्मार्ट लकडाउन , यो कस्तो खालको लकडाउन ?
Homeसमाचारअसार दोस्रो सा’ताबाट स्मार्ट लकडाउन , यो कस्तो खालको लकडाउन ?
June 17, 2021 admin समाचार 2890
असार दोस्रो सा’ताबाट स्मार्ट लकडाउन हुने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समितिको बुधबार बसेको बैठकले संक्र’मणको जोखिम राख्न र अत्यावश्यक ब’स्तुहरुको उत्पादन तथा आपूर्ति सुचारु गर्न स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निका’लेको छ ।
हाल जारी निषे’धाज्ञा कायमै राख्ने र त्यसपछि अवस्था मूल्यांकन गरी केही क्षेत्र खुला गर्ने निर्देशक समिति’को निर्णय छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, जापान लगायतका मुलुकमा पुनः हवाई उडा’न सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । यी देशहरुबाट सातामा दुई हजार यात्रु नबढ्ने गरी हवाई उडान सु’चारु हुनेछ ।
बैठकले वैदेशिक रोज’गारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सह’योग रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । कुल १५ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि १० दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्था’पन गर्नेछ ।
बैठकले सिसि’एमसी केन्द्रको प्रशासनिक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण क्षेत्र र अत्याव’श्यक उद्योगलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ खोल्न दिइ’नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, गैर आवासीय नेपाली’हरुबाट पठाइन लागेको अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन हवाई ढुवानी भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने एवं इजरा’यल सरकारबाट सहयोग स्वरुप दिन ला’गिएको सघन उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री स्वीका’र गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधा’नमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्दै लकडाउनलाई सक्रमणको जोखि’म नहुने हदसम्म मात्र खुकुलो गर्न सकिने बता’एका थिए।
कोभिड नि’यन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व खोप नै भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४० लाख डोज खोप ल्याउन गृहकार्य भइ रहेको आगामी साउ’नदेखि लगाउन थालिने बताएका थिए। त्यसबाहेक अन्य देशसँग पहल प्रयत्न भइरहेकोले खोपको अभाव क्रमशः हल हुँदै जाने उनले बता’ए। इताजा खबरबाट
असार ३ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
१५ वर्षदेखि फलामको सिक्रीले बाँधेर राखिएका, हृदयनारायणको उ’द्धार
August 2, 2020 Administer Banner Post, अन्तर्राष्ट्रिय, भिडियो, मनोरंजन, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 124375
सपना रोकालाई यौ’न दु’व्र्य’वहार गरेर मा’र्नेसम्मको ध’म्की दिएको भन्दै सपनाका बाउआमा रुदै आए मिडियामा (भिडियो सहित)
February 6, 2021 admin समाचार 5414
काठमाडौंको पशुपति आर्यघाटमा श’व जला’उने सपना रोका मगर विश्वका सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी थिईन। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले सा’र्वजनिक गरेको सन् २०२० (यो वर्ष) का प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाका रूपमा छानेका सय जनामध्ये नेपालकी
यस्ता बेहुला जसले राखे, बेहुली बो’क्ने भन्दै वर्षौ देखि ६३० केजीको बंगुर हे’र्नुहोस्
April 23, 2021 admin समाचार 4062
रोचक र विचित्रको घ’टनाका लागी चीन विश्व्मा नै शिर्ष स्थानमा पर्ने गर्छ । जहाँ कहिल्यै नदे’खिएका र नचिताएका ख’बरहरु सुन्छिन्, देखिन्छन् र भाइ’रल पनि बन्न पुग्छन् । यसैबिच चीनको बीजिंग गाउँमा बि’वाह पश्चात दुलहीलाई सुँगुरमा
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220380)